Ukuqhubela phambili kunye nokuphunyezwa kwe-BIM-Central America ityala-iGeofumadas
Ukuqhubela phambili kunye nokuphunyezwa kwe-BIM-Central America ityala
Epreli, 2019 Zobunjineli, ezintsha
Ukuya kwi-BIMSummit e-Barcelona kwiveki ephelileyo bekumnandi. Jonga indlela ezahlukileyo iimbono, ukusuka kokungathembeki ukuya kumbono omkhulu, ziyavuma ukuba sikwixesha elikhethekileyo lenguquko kumashishini aqala ekuthinjweni kolwazi ebaleni ukuya kudityaniso lwentsebenzo ngexesha lokwenyani labemi. I-BIM idlala indima ebaluleke kakhulu kukudibana kwamandla obuchwephesha asetyenziswa licandelo loshishino, ibango leenkonzo ezingcono ezisuka kumsebenzisi wokugqibela weenkonzo zikarhulumente kunye nokulingana okunokubakho.
Kodwa phakathi kwamabali empumelelo yethemba lamazwe aseNordic apho ukuthetha ngeOpSource kungasakhubekisi mntu, kwaye ukungxamiseka kwamazwe ezobuchwephesha apho i-ajenda iphuhliswa licandelo labucala, kukho inyani yenyani yamazwe apho Ukusebenza ngokungafanelekanga kukaRhulumente ngenxa yendima yakhe kulawulo lokukhangela iimeko ezingcono elizweni. Kule meko, sathetha kancinci ngencoko yam yokugqibela noGab!, Umdibanisi weGeofumadas, owathi kwisiqingatha seyure yekofu, wandixelela ngombono wakhe we-BIM kwimeko ye-Central America.
Ngokwenyani, awona mava alungileyo okuphumelela kule meko anokufihlwa ngokubonakala okucwangcisiweyo; ke kufuneka sibhenele koko sikuvileyo apho. Ukususela ekuqaleni, kukho ukusasazeka okukhulu kwenkqubela phambili kumazwe anjengeCosta Rica nePanama, nangona kunjalo, kwamanye amazwe ommandla, nangona kukho ulwazi kumanqanaba abucala, imeko yezemfundo kunye neyaseburhulumenteni ayibonakali kwinqanaba lokuphumeza; Ukuba siyibona ngokwembono ebanzi ye-BIM, ukuba ngaphaya kokwakha imodeli sisicwangciso esidibanisa ukulawulwa kolwazi kunye nolawulo lokusebenza ngaphakathi kwesakhelo sokwamkelwa kwemigangatho.
Umxholo weBIM Panama
Ukuba yiPanama ilizwe elinokukhula okwakhayo ngakumbi, kukho ukuvuleka okungakumbi kunye nokungxamiseka. Kuya kufuneka uphume kwisikhululo seenqwelomoya kwaye uhambe ecaleni kwendlela kwaye ubone ukuba icandelo lokuthengiswa kwezindlu liyindawo ekhethekileyo eMbindi Merika, ke ngoko, i-BIM ngumdibaniso ogqibeleleyo wokudityaniswa kwendalo okwenza izinto ezahlukeneyo zomzimba, i-IT kunye nolwakhiwo . Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, ukukhumbula ukuba yintoni iPanama njengelizwe elinentshukumo yokuthengisa eneemfuno zehlabathi, ezingenakho ukusala ngasemva.
I 14 Julayi 2016 yasePanama Chamber of CAPAC Lokwakha ngokudibene yasePanama Society of Iinjineli kwaye Architects SPIA kunye Universities of yasePanama, zobugcisa USMA, isaziso ukudaleka ibhodi yobugcisa eya kubonelela ukuphunyezwa kwenkqubo BIM, BIM Forum ebizwa ePanama.
Kukho iinkampani ezininzi ezikhuthaza ukusetyenziswa kwe-BIM njenge-Autodesk, iForam ye-Bim ye-Panama, iBentley Systems, i-PCCad, i-Blue AEC Studio, i-Comarqbim, phakathi kwabanye.
Iprojekthi yeBIM evelele ePanama kukunyuka kwePanama Canal.
I-BIM Model Panama Canal. Wamkela i-Autodesk BIM Experience award ngoyilo lwesithintelo sakhe sesithathu.
Ngokuqhelekileyo, kuninzi kakhulu ukuvuleka kwimbutho yangasese, kunye nezikhundla zobuchwepheshe ezicela ukuphathwa kwe-BIM njengemfuneko yokuphuhliswa kweeprojekthi.
Umxholo weBIM Costa Rica
Eli lizwe likhuthaza ngendlela ethile ukusebenzisa i-BIM iinkqubo ekwakhiweni olutsha. Inxalenye enkulu, ngenxa yeemfuneko zamazwe ngamazwe, ezinye iinkampani ezizimeleyo ziqala ukuphumeza ezinye iinkqubo; Nangona kunjalo, ukunikezelwa kwabasebenzi beBIM abaqeqeshiweyo kuncinci, ukuba sithelekisa kunye namazwe aseMzantsi Melika. ICosta Rica sele i-Forum yeBim yaseCosta Rica.
Iforamu ye-BIM iCosta Rica yiKomidi yobuGcisa eyenziwa ngenjongo yokukhuthaza ukuphunyezwa kunye nokuphunyezwa ngokuthe ngcembe kweenkqubo ze-BIM kwishishini lokwakha.
Ngokomzekelo umdla, kwi Inter-American Development Bank (Infrastructure Management IDB kunye Division of Science, Technology kunye Innovation (CTI), sisebenza ekufakeni BIM kuyilo kweliso neeprojekthi zezibonelelo.
E-Costa Rica, umzekelo, ukufuduka kwezicwangciso zoyilo kumzekelo we-BIM kunye nokulandelelana kwayo ngexesha lokwakha lufakwe kwiinkcukacha zolawulo lwengqesho. Oko kukuthi, moya 2D 3D zigqithiswe, kunye nolwazi umgangatho, ukulandelelana ulwakhiwo (4D) kunye nolawulo iindleko (5D) iya kuhlanganiswa; Oku kuya kukuvumela ukwazi ixesha, umgudu kunye neendleko zokunyuka, ukuhamba ukusuka kwidalo yendalo kunye ne-BIM. Izivuno, iindleko, nemihla kwaye ifuna ukulungiswa ngexesha umsebenzi wokwakha kwi San Gerardo - Barranca, iza kuthelekiswa kunye icandelo Limonal - San Gerardo, leyo ngokwenkcukacha uyilo efanayo, kwaye uya kwakhiwa ngaxeshanye.
Nangona kukho indlela ende ukuya kummandla, iziphumo olulilinge aya kuba inkuthazo oorhulumente ukuphumeza BIM kunye namava iinzuzo imveliso kunye nokusebenza ngokusebenzisa utshintsho olukhulu kwindlela imisebenzi iphunyezwa.
Umxholo weBIM Guatemala
Ngenxa yokuba lizwe elikhulu, kukho ezinye iinkqubela phambili kwiBIM. Sivele sibe ne-Master kwiModeling kunye noLawulo lweeProjekthi zokwakha iBIM Management kwiYunivesithi yaseValle de Guatemala kunye ne Universidad del Istmo kunye noMphathi kwi-Bim Management.
Kukho amaziko azinikele kuqeqesho eBim njengeRevit Guatemala kunye neGuateBIM (iBhunga leBIM laseGuatemala). Kukho ulwamkelo kwinqanaba labucala. Umzekelo unokuba yinkampani iDanta Arquitectura ezinikele ekubandakanyeni i-BIM. Kwaye masingashiyi ngasemva abasasazi besoftware ye-BIM abangayeki ukukhuthaza le ndlela.
Umxholo weBIM El Salvador
E-El Salvador, ulwazi olungaphantsi lufumaneka. Nangona kunjalo, iiprojekthi ezinjengezo zakhiwe yi-Structuristas Consultores EC ezenziwe nge-BIM.
Iprojekthi: Iziko leenkcukacha zeTIER III kunye nezakhiwo zeofisi zaseburhulumenteni eziqingqiweyo zaseBanco Agrícola, eSan Salvador.
Zizakhiwo ezimbini zendawo yokwakha ye-11,000 m2 kuquka: isikhungo seenkcukacha ezineempawu ze-TIER III kunye nesakhiwo seofisi zenkampani zama5.
Uyilo lolwakhiwo, uyilo lwe-HVAC kunye nolungelelwaniso lobunjineli obuninzi, kusetyenziswa izixhobo ze-BIM kunye nokujonga inkqubela phambili ngemodeli ye-BIM.
Iziyalo zibandakanya: i-Civil, izakhiwo, i-Architecture, uMbane, iMichini, iMibhobho.
Nangona le yiprojekthi yokwamkelwa kwe-BIM, ngeendlela zayo ezahlukeneyo; Ewe, amaxwebhu kunye nenxalenye yocwangciso ayicacanga kangako; nangona ewe kwisicelo sakho sokubonisa. Kukho izithuba zolwazi kule nto, xa inqaku lephepha-ndaba okanye kugxilwe kwizifundo lujolise kuphela kulwakhiwo / imodeli yolwakhiwo, kodwa ulibale ukubonisana nezigaba zokusebenza emva koyilo kude kube iziseko zidityaniswe kwimeko.
Umxholo weBIM eNicaragua
Nasi sifumana izibonakaliso zamaziko okuqeqesha, ezinye iindibano nakuba zingaphezu kwezinga lokuphunyezwa, kusekho kwisigaba sokwenza i-BIM. Kukho izifundo ezithile zokwakha izakhiwo ezizisa ixesha, njenge-BRIC.
Ngokomzekelo, CentroCAD, ngokoluvo lwam lelinye lawona maziko oqeqesho alungileyo eNicaragua, ikhosi yayo yoHlaziyo ihlala ijolise kwi-Architecture nakwi-MEP, kodwa sibona okuncinci kunikezelo lwayo umxholo wolwakhiwo, iindleko okanye ukulinganisa ulwakhiwo. Nangona i-BIM ifundiwe, ayifani nokufunda ukumodareyitha kunye nesoftware kunokuqonda iinkqubo ngendlela ebanzi apho isixhobo kuphela kwendlela yokugcina kunye nokusebenza kwedatha.
Yintsimi echumileyo yeAutodesk ebisandula ukubamba iBIM Congress eNicaragua; Inqaku elihambileyo kunye neenzame eziqhubekayo ziiyunivesithi kunye nemibutho yobungcali ye-Geo-engineering. NgeForum ye-BIM ye-2019 ebibanjelwe eManagua, nezithethi ezivela kulo lonke elakuMbindi Merika, kwiRiphabhlikhi yaseDominican naseColombia, kuyacaca ukuba kweli lizwe kukho umsebenzi omninzi ovela kwicandelo labucala, ukuba isikolo sinenxaxheba ebalulekileyo, kodwa ngaphezulu kwako konke isidingo sokugxila kwiinzame ukuphakamisa amandla e-BIM kwimigaqo-nkqubo yoluntu.
Umxholo weBIM eHonduras
NjengeNicaragua, ikwinkqubo yentlalontle, yoqeqesho, yeenkongolo, kunye nokwazisa abaqeqeshi bezokwakha. Kukho amaziko azinikeleyo ekukhuthazeni ukuphunyezwa kwe-BIM kunye nabasebenzi beenkampani zoqeqesho, ezinje ngeSoftware yePC, uCype Ingenieros, kunye neKholeji yabaCwangcisi beZakhiwo baseHonduras.
Kukho umdla kwicandelo labucala ukuqala ukumiliselwa kwe-BIM, kuhlala kusikelwe umda. Ukuzalwa okutsha kweenkampani ezintsha ezinombono omtsha onje ngeGreen Bim Consulting, ezinikele ekubonisaneni nasekuphuhliseni iiprojekthi ze-BIM ezinzileyo, inomdla. Iinkampani ezomeleleyo ezinje ngeZiko leKatodos BIM ngummeli weHonduras.
Kwiinyanga ezizayo, icandelo lokwakha bucala liye lakwazi ukuqhuba i-1,136.8 meter square kwiiprojekthi ezahlukeneyo eHonduras, i-57,5% yayiyiiprojekthi zokuhlala; 20,2% yorhwebo, i-18,6% kwiinkonzo kunye ne-3,7% yezoshishino. Kuloo mali, inxalenye encinci yezakhiwo ezenzelwe ubugcisa bendabuko obungathi bendabuko njengeBIM ukuyila iiprojekthi.
Injineli uMarlon Urtecho, umphathi jikelele weeNkqubo zoLwakhiwo lweAccensus, uqinisekisile ukuba inkqubela phambili kulwakhiwo ngoku ivumela iprojekthi ukuba ijongwe ngobunono obukhulu:Ngoku iiofisi zokwakha zingabonakalisa iiprojekthi zazo kwinqanaba lesithathu ngokukhawuleza kunye nemifanekiso engaphezulu"Wathi. Kucacile ukuba umbono ofana nalokhu ubonisa ukuba akukho nto icacileyo malunga nobukhulu be-BIM.
Nangona ulwazi olusasazekayo oluvela eHonduras, isiphumo seMatshi ye-2019 yakutshanje, umhla I-BIM yokuqala yeNgqungquthela yaseCentral America kunye neCaribbean. Kwakusele kancinci emva kokuba inqaku lalisele libhaliwe, nangona kunjalo lizisa izibane ezinomdla kwinqaku elilandelayo leBIM kuMbindi Merika.
Nangona ubunzima kushishino, kushishino Honduran akwabonisa inkqubela elithile ekusetyenzisweni BIM (ubuncinane kwinqanaba lolwazi modelling) ingakumbi udidi bokwakha, okuye zibonisa inkqubela kuyilo projekthi. Kwizenzo ezisisiseko zezinga le-2 (KwiBIM Level2) apho isicelo saso sisetyenziswe njengelinganayo elungileyo yezinto zokwakha kuzo zonke izicatshulwa ezisetyenziselwa ukwakhiwa kwezakhiwo, okwakuncinci kwizixeko eziphuhlisiweyo zi thembisa.
Inqaku elivela kwiphephandaba i-Procesohn liphuma, http://proceso.hn/tecnologia/2-ciencia-y-tecnologia/constructores-hondurenos-avanzan-en-el-uso-de-tecnologia-bim.html
Emva kweekomityi zekofu kunye neswiti emnandi, siphantse sagqiba ngoGab! ukuba i-BIM ayikagqibi ukufika eMbindi Merika. Ngokuqinisekileyo isifundo esisemgangathweni esinobuchule sisona sikhewu kulo mbandela, kwicala labo kufuneka bakhuthaze ubuchule kunye nokubekwa emgangathweni. Ngokuqinisekileyo zikho ezinye izizathu, kodwa kwi-napkin sibhala ubuncinci oku kulandelayo njengezinto eziphambili ngokubaluleka:
Iindleko eziphezulu zabaqeqeshi kunye nokungabikho kwabaqeqeshi abaqeqeshiweyo. Abaphathi BIM babalwa kwiminwe yesandla; Ukukhumbula ukuba ukuzisa i-consultant yamazwe ngamazwe kuyabiza.
Iindleko eziphezulu zeelayisenisi ze-software (ilayisenisi yase-Central America inokuhlawula amaxesha e-3 oko kubiza eMexico, eMelika okanye eChile). Iinkampani zokuhanjiswa zibeka kwizinga eliphantsi lokuthengisa, ngoko kufuneka ziphakanyise amanani ukuhlangabezana neenjongo ezisungulwe iinkampani zabazali. Oku kukhuthaza ukuguqulwa kunye nokwesaba ukuphunyezwa kwe-BIM ngenxa yezohlwayo ezinokufunyanwa kwi-software distributors.
Iindleko eziphezulu zeekhomputer ezifunekayo ukuqhuba iindlela ze-BIM, ezifana nokuhlanganiswa kwezicwangciso ze-interface ezixhobo zokusebenza zangaphandle okanye ukunikezela.
Akukho sikhokelo esisisiseko ekucwangciseni nasekulungiseni ngokukodwa amaxwebhu afanelekileyo kwiiprojekthi. I-BIM idinga ukuzalisa ifomu efana ne-EIR, BEP, i-BIM Protocols, ngokulandela ummiselo, njl. -Ngubani ophethe ixesha, xa becela ukuba ndiqale le projekthi izolo- Ingqungquthela eyaziwayo phakathi kwabaqeqeshi bezokwakha okungaqinisekanga, kuba xa uceba kakuhle, unokwenene ukwenza iiprojekthi ngexesha lokubhala.
Umgangatho ophezulu wenkohlakalo ochazwe kwezi mongo. Ngamanye amaxesha ukufihla ulwazi luvumela ukuphakamisa iindleko zeeprojekthi, ngokubanzi iphrojekthi, kulula ukuyifaka. Siyacaca ukuba ukumkela i-BIM kuya kunqanda iinkqubo ezininzi zenkohlakalo ezimbi kwiiprojekthi zikaRhulumente.
Iingcali zokwakha ukuba awufuni ukushiya AutoCAD, ezikwisimo jikelele ukuba ufuna ukuqonda i isakhono umzekelo 3D. Kungenxa yokuba kufuneka umsebenzi elingana inikeza ukubuyekeza umgudu ukuze ukufunda, ngokukodwa ithuba ukuqalisa kwi lula kunye ifoun xa sibona BIM njengoko ngaphezu 3D umzekelo.
Ukuphunyezwa kwe-BIM kuneendleko zayo, ngakumbi kwisoftware ukuba ufuna ukusebenza ngokusemthethweni; Oku akukho lula kwiinkampani ezininzi ezisokolayo ukuphila koluqoqosho ludandathekileyo apho bambalwa abathatha iiprojekthi ezinkulu ngenxa yolawulo olukhona. Kwaye ukuba ngumqeqeshi we-BIM nayo yonke imithetho, kubalulekile ukuba ube namaphepha-mvume ngokulandelelana. Ukuqokelelwa kwesoftware yokuqeqesha i-BIM kunokuthetha ukutyala imali eyi-US $ 3,500.00 ngonyaka kwilayisensi enye, kwamanye amazwe akuMbindi Merika. Kuhlala kubonakala ukuba ingakanani le nto ephucula isoftware njengamanyathelo enkonzo aqhutywa ngababoneleli besoftware abakhulu.
Ukuqukumbela, uMbindi Merika ngokubanzi ukwinkqubo yentlalontle ye-BIM, sisebenza ngemodeli ye-3D, kodwa silinganiselwe kwinqanaba lomgangatho esiwubonayo kwezinye iimeko. Okwangoku, sishiya uhlaziyo olutsha lweli nqaku lisalindelwe, siyazi ukuba kwiCongress yamva nje sinokufunda okutsha emva kolwazi ngelishwa olungacwangciswanga ngaphaya kokutshintshiselana ngeziganeko ezithile.
Nangona kunjalo, kwelinye icala ngqekembe kuMbindi Merika, lithuba umdla ukuba kwezemfundo, abucala, abadlali abaqeqeshiweyo ukulawula ndzulu icandelo urhulumente iinzuzo kunye neemfuno akhona emgangathweni.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Dweba amaphulo, imigca kunye neetekisi ze-polygonal ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-AutoCAD
Post Next Imigca ejikelezayo esuka kuGoogle Earth-ngamanyathelo ama-3Okulandelayo »